Zapiet: Kwado nzipu ma chekwaa nnara ya na shopify | Martech Zone
Zapiet: Kwado nzipu ma chekwaa Pickup na Shopify
Ebe mba ndị kewapụrụ onwe ha na mgbasa nke COVID-19, ụlọ ọrụ na-agba mbọ ime ka ndị ọrụ ha na-arụ ọrụ, na-emeghe ọnụ ụzọ ha, na-egbo mkpa ha. N'ime ọnwa ole na ole gara aga, enyere m aka ugbo ala na-eme nnyefe anụ na Indianapolis ha Shopify echichi. Ha nwere ọtụtụ ndị na-ere ahịa ndị gbakọtara usoro ahụ tupu m abata n'ụgbọ mmiri na m na-arụ ọrụ iji mee ka njikọta na njikarịcha sie ike mgbe ọrịa ahụ kụrụ.
Ugbo ahụ na-arụ ọrụ ugbu a ehihie na abalị iji gboo mkpa, ọ bụkwa ya bụ nkwado m maka ndị ahịa ikpeazụ yana ndị ọrụ. Ha enweghị onye ọ bụla nwere aka iji nyere aka na enwere ọtụtụ ntinye aka. Otú ọ dị, otu ihe dị mkpa nke nrụnye Shopify ha bụ ngwa wuru Oghere maka Ichekwa Nnweta na iclọ Ahịa.
Zapiet Store Pickup + Nyefee
Na ngwa ha, enwere m ike ịmepụta iche koodu mpaghara dabere na mpaghara ndị setịpụrụ oge nkwadebe na ụbọchị nnyefe. Anyị nwekwara ike itinye ebe ụlọ ahịa maka ndị ahịa iburu iwu ha ozugbo. Oge nkwadebe na-enyere ndị ọrụ aka inwe oge iji kpokọta iwu, dọọ, ma nyefee ha ma ọ bụ buru ha. N'okwu onye ahịa a, ha nwere ikike inyefe nke ha. Ngwa ahụ jikọtara ya na ọrụ nnyefe ndị ọzọ, kwa.
Mwekota na Shopify ụgbọ ala enweghị ntụpọ, na-enye onye ahịa ohere ịhọrọ nnyefe ma ọ bụ chekwaa nnara. Ọ bụrụ na ọ bụ nnyefe, Koodu nzipu ozi ma ọ bụ zipụ na-arụ ọrụ dị ka ebe enyerela ya ma nyekwa onye na-ahọta ụbọchị iji họrọ ụbọchị nnyefe kwesịrị ekwesị. Ọ bụrụ na ọ bụ ụlọ nnweta ụlọ ahịa, ị nwere ike ịchọta ụlọ ahịa kacha nso. Ọ bụrụ n’inwere otu ebe, ị na - ahọta mgbe ịchọrọ ịtụtụrụ iwu. Nke a bụ ihe ọ dị ka saịtị onye ahịa m:
Akụkụ akụkụ: Ọ bụrụ na ịnọ na etiti Indiana ma chọọ ịnwale nnyefe ụlọ Tyner Pond Farm, nke a bụ Ntuziaka 10% na usoro izizi gị!
Zapiet's Shopify App nwere ihe ịga nke ọma na ndị otu nkwado ha kwuru na ha agbakwunyela ihe karịrị otu puku ụlọ ahịa n'oge nsogbu a. Ndị otu nọ ebe ahụ na-arụ ọrụ ehihie na abalị iji nyere ndị ahịa ahụ aka ma hazie ngwa ha.
The ngwa bụ nnọọ mgbanwe. Mgbe anyị chọrọ imechi nnara ụlọ ahịa, ọ dị mfe dịka ịgbanyụ ya na ngwa ahụ ma anyị nwere ike ịmegharị ya mgbe nsogbu ahụ gafere. Anyị nyekwara aka ogwe osisi mara mma nke na-eji ngwa ahụ, na-enyere ndị ọbịa ọhụụ aka ịlele iji hụ ma anyị na-ebuga na koodu zip ha.
Akụkụ nke Plọ Ahịa buru ibu + Nzipu Gụnyere:
Nweta nnweta - Kpọọ ngwaahịa dị iche iche maka naanị maka nnara, nnyefe ma ọ bụ mbupu.
Shopify POS mwekota - Lelee, jikwaa na hazie mbudata na nnyefe gị na nchekwa.
Multi-ọnọdụ yiri nkata - Mekọrịta ma gosi ndị ahịa nnweta ịdị adị n'ofe ọ bụla.
Nhazi njikwa - Hụ na anya nke iwu dị mkpa iji kwadebe maka ụbọchị ma ọ bụ ụzọ ọ bụla enyere.
Mgbochi wayo - Debe iwu gị ka ọ ghara ịdaba na aghụghọ site na itinye atụmatụ Ntuziaka ngwa ngwa ahụ.
Ebe a na-akparaghị ókè - Mfe mbubata ọnọdụ gị niile ma jikwaa ha n'otu n'otu.
Mgbasawanye nke ukwuu - Kọwaa nnweta, nkwụsịtụ, mmebi iwu, akpaaka, iwu, na ndị ọzọ.
Datebọchị na oge onye na-atụtụ - Tọọ ọnọdụ na nnweta ngwaahịa ya na nkeji oge ise ma hapụ ndị ahịa ka ha họrọ.
Ofụri Esịt dakọtara - Gbanye na Deliv, Quiqup, Mbupu Ntanetị, Mbupu Mbupu, Iwu Mbupu Advanced na ndị ọzọ. Lee ha niile Njikọ nke Zapiet.
Draft iji nkwado - Gbanwee iwu ndị dị ugbu a ka ọ bụrụ nnara ma ọ bụ nyefee iwu.
Oghere nnyefe - Zere overcommitments site na ịmachi ọnụ ọgụgụ nke nnyefe na ihe ọ bụla e nyere oge oghere.
Geodistance nkwado - Na-enye aka ọnụahịa na ọrụ kwesịrị ekwesị na-adabere na ọnọdụ ndị ahịa.
Ma, ọ bụrụ n'ịchọrọ ịhazi ọnụego nnyefe gị, Zapiet nwekwara ngwa maka Gwọ nzipu site na anya or Eligwọ nzipu site Koodu Zip. Zapiet na-enye nnwale n'efu ụbọchị 14, yabụ ị nwere ike ịlele ngwa ahụ dabara na arụmọrụ gị ma mee ihe ịchọrọ. Kagbuo n'ime oge ahụ ma agaghị akwụ gị ụgwọ.
Wụnye Storelọ Ahịa Zapiet + Nnyefe
Tags: nnyefe ngwannyefe ụlọ ecommercennweta ecommerce ụlọ ahịaụlọ ahịaBulie ụlọ ahịa nnaraUgbo ala nke Tyner